KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Axmed Cali Gees ” Saxaafadda dhex dhexaad ma noqon karto”
Monday 23 August 2010 13:40
Muqdisho (Keydmedia) Axmed Cali Gees oo ka mid ah Odayaasha sida weyn ula dhacsan dhibaatada ka socota Magaalada Muqdisho isla markaana taageera kooxaha Dowlada ka soo horjeeda ayaa hadal u siiyay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho uu ku sheegay in aanu saxaafadda dhex dhexaad noqon karin.
" Ma noqon karto dhex dhexaad saxaafadda, macanaha dhex dhexaadna waa in cadawga lala jiraa, marka kama yeeleyno wariyaasha iyo warbaahinta in ay cadawga gar gaar u noqdaan" sidaa waxaa yir Axmed Cali geesi.
Hadalkan oo ah kii ugu horeeyay ee Axmed Cali gees si muuqata oo ay bulshada wada maqleysa uu u sheegay, balse waxaa jiray dhawr kal oo hore handadaad telfoonka uu u soo marsiiyay Agaasima yaal idaacadeed iyo wariyaal intuba.
Mid ka mid ah Agaasimayaasha Idaacadaha Magaalada Muqdisho oo xili uu telfoonka ka soo wacay uu u sheegay Axmed Cali gees in talaabo uu ka qaadi doona isla markaana uu ka soo horjeedo waxa uu Gees ugu yeeray Jihaadka Barakeysan ayaa u sheegay Keydmedia.net in uu caada ka dhigtay handadaada suxufiyiinta iyo howl wadeenada warbaahinta isagoona ka dalbada wariyaasha in ay wareestaan shaqsiyaad uu isaga daneynayo hadii kalana uu dhibaateyn doono.
Axmed Cali Gees waxa uu markii ugu soo horeysay Saxaafada ka soo muuqday markii isaga iyo adeerkiis Axmed Diiriye Cali ay xabsiga dhigeen ciidamada Dowladii C/llaahi Yuusuf Axmed , waxaana xiligaas wixii ka danbeeyay uu noqday mid ay ku sii kordheyso jaceylka uu u qabo kooxaha Dowlada ka soo horjeeda.